Mayelana NATHI - Fujian Uniland Foods Co., Ltd.
IFujian Uniland Foods Co., Ltd. Itholakala eningizimu-mpumalanga yeFujian, entshonalanga ye-Taiwan strait, elula ukuthuthwa emhlabeni wonke nge-Xiamen port.
Ngaphezulu kweminyaka engama-20 yesipiliyoni kulayini we Ukucubungula imifino ne-IQF.
Siyaqhubeka nokwenza imizamo unyaka nonyaka ukuhlangabezana namakhasimende ethu anhlobonhlobo yemifino nezithelo ezisezingeni eliphakeme ngokuhambisana ne-GAP, HACCP, imithethonqubo ye-ISO, kanye nezitifiketi ze-BRC, FDA, KOSHER, HALA.
I-Uniland izinikele ekuholeni iprosesa futhi ukuthekelisa.
Njengamanje, sinama-workshops wama-3000 square metres, kufaka phakathi imigqa emibili yokucubungula nezindawo zefriji, ngayinye iphatha amathani ayi-6 / ngehora. Kuze kube manje, amandla wokukhiqiza angaphezu kwamathani ayizinkulungwane ezingama-20 minyaka yonke.
2 X 100 square metres amakamelo okupakisha.
3 X 500 square metres for pre-processing workshops.
Ngaphezu kwamamitha-skwele ayi-1000 wezindawo zokugcina ezingama-8 zangaphambi kokupholisa.
Amathani ayi-5000 wesitoreji esibandayo.
Futhi, sakha indawo yokusebenzela entsha yemifino nezithelo ezinomthamo ngamamitha ayisikwele angama-4 x 220 Izosilethela amabanga amaningi emikhiqizo yezempilo kumakhasimende ethu.
Imikhiqizo yethu eyinhloko yilezi: ama-bamboo shoot trips / tincetu, ama-black fungus strips, ukusikeka kabhontshisi oluhlaza, ubhontshisi omncane ohlaza (i-edamame) izinhlamvu / igobolondo, izinkomishi zommbila omnandi / izinhlamvu izingcezu ze-chestnut / ama-cubes, i-cauliflower florets, ama-broccoli florets, amahlumela ebhontshisi we-mung, ama-phayinaphu, ama-mango dices, ukusika ubhanana, i-lychee nokunye
Sijabulela ukuthanda kwethu ukusebenzisana ukwenza isitshalo nebhizinisi, sihlala senza konke okusemandleni ethu ukunikela ngemikhiqizo esezingeni eliphakeme ngamanani okuncintisana amaklayenti ethu avela ezifuywayo naphesheya kwezilwandle. Sizoqhubeka nokwakha ubudlelwane bebhizinisi obuzuzisa isikhathi eside nawo wonke amakhasimende ethu avela emhlabeni wonke.